I-CSV Explorer: Sebenza Ngamafayela amakhulu we-CSV | Martech Zone
Amafayela e-CSV ayisisekelo futhi imvamisa iyinhlangano ejwayelekile kunazo zonke yokungenisa nokuthumela idatha kunoma yiluphi uhlelo. Sisebenza neklayenti njengamanje eline-database enkulu kakhulu yoxhumana nabo (amarekhodi angaphezu kwezigidi ezi-5) futhi sidinga ukuhlunga, ukubuza, nokuthekelisa ingxenye ethile yedatha.
Liyini ifayela le-CSV?
A amanani ahlukaniswe ngamakhoma ifayela yifayela lombhalo elihlukanisiwe elisebenzisa ukhefana ukwahlukanisa amanani. Umugqa ngamunye wefayela irekhodi ledatha. Irekhodi ngalinye linenkambu eyodwa noma eziningi, ezihlukaniswe ngamakhoma. Ukusetshenziswa kwekhefana njengokuhlukanisa insimu kungumthombo wegama laleli fomethi yefayela.
Amathuluzi wedeskithophu afana ne-Microsoft Excel ne-Google AmaSpredishithi anemikhawulo yedatha.
I-Microsoft Excel izongenisa amasethi wedatha anemigqa engafika kwesigidi kanye namakholomu angenamkhawulo kuspredishithi. Uma uzama ukungenisa ngaphezu kwalokho, i-Excel ikhombisa isexwayiso esithi idatha yakho incishisiwe.
Izinombolo ze-Apple izongenisa amasethi wedatha anemigqa engafika kwesigidi namakholomu ayi-1 1,000 kuspredishithi. Uma uzama ukungenisa ngaphezu kwalokho, izinombolo zibonisa isexwayiso esithi idatha yakho incishisiwe.
AmaSpredishithi e-Google izongenisa amasethi wedatha anamaseli afika ku-400,000, anezinhlayiya ezingama-256 ishidi ngalinye, kuze kufike ku-250 MB
Ngakho-ke, uma usebenza nefayela elikhulu kakhulu, kuzofanela ungenise idatha ku-database kunalokho. Lokho kudinga ipulatifomu yedatha kanye nethuluzi lokubuza lokuhlukanisa imininingwane. Uma ungafuni ukufunda ulimi lokubuza kanye nesiteji esisha… kukhona okunye!
I-CSV Explorer iyithuluzi le-inthanethi elilula elenza ukwazi ukungenisa, ukubuza, izingxenye, nokuthekelisa idatha. Uhlobo lwamahhala lukuvumela ukuthi usebenze nemigqa yokuqala eyizigidi ezi-5 okwesikhashana. Ezinye izinhlobo zikuvumela ukuthi ugcine amasethi wedatha angafika kumigqa eyizigidi ezingama-20 ongasebenza kalula ngayo.
Ngikwazile ukungenisa amarekhodi angaphezu kwezigidi ezi-5 namuhla kungakapheli nemizuzu emingaki, ngibuza idatha kalula, futhi ngithumela amarekhodi ebengiwadinga. Ithuluzi lasebenza ngokungenaphutha!
Izici ze-CSV Explorer Faka
Idatha enkulu (noma ejwayelekile) - Imigqa embalwa noma imigqa eyizigidi ezimbalwa, i-CSV Explorer yenza ukuvula nokuhlaziya amafayela amakhulu we-CSV kusheshe futhi kube lula.
Ukhohlise - I-CSV Explorer kulula ukuyisebenzisa. Ngokuchofoza okumbalwa, hlunga, sesha futhi usebenzise imininingwane ukuthola inaliti ku-haystack noma ukuthola isithombe esikhulu.
Thumela - I-CSV Explorer ikuvumela ukuthi ubuze futhi uthumele amafayela - ngisho nokuphinda amafayela ngenombolo yamarekhodi ongathanda kuwo ngamunye.
Bona ngeso lengqondo & Xhuma - Idatha yePlothi, gcina amagrafu wezethulo, noma uthumele imiphumela ku-Excel ukuze iqhubeke nokuhlaziywa.
Qalisa nge-CSV Explorer
Tags: amanani ahlukaniswe ngamakhomaCSVcsv wamazweIdathakakhuluAmaSpredishithi e-Googleamasethi edatha amakhulu